Fofon-tsakafom-boankazo misy crème voankazo maina | ThermoRecipes
Puff pastry sy voankazo voankazo maina
fitsangatsanganana80 minitraOlona 12300 kaloria
ny Ascen Jimenez
Manana ravin-tsakafo puff ao anaty vata fampangatsiahana ve ianao? Androany dia manome hevitra anao izahay hanararaotanao azy ireo. Hanomana ireo matsiro ireo isika boribory feno crème nut.
Ny zavatra voalohany hataontsika dia ny crème, amin'ny Thermomix. Avy eo dia haparitantsika amin'ny mofomamy puff, hataontsika ny fanapahana, horodintsika ny tadiny tsirairay ... ary hofaranantsika amin'ny voaendy.
Nampiasa fangaro ny voanjo tsy nasiana sira. Ny mixako dia misy cashews, almond, hazelnut ary kennuts. Tsy afaka mampiasa afa-tsy ianao amygdala na cashew fotsiny raha izany no ao an-trano. Tsisy olana.
Tsy manahirana ny fanaovana ireo vatomamy ireo, indrindra raha manaraka ny horonantsary avelanay eto ambany ianao, miaraka amin'ireo dingana rehetra harahina.
1 Puff pastry sy voankazo voankazo maina
Miaraka amin'ny ravina mofomamy puff roa dia hanomana an'ity mamy voalohany ity isika.
Fotoana hiketrehana: 1H
Fotoana manontolo: 1h 20M
70 g ny voanjo isan-karazany (hazelnuts, legnuts, cashews ...), tsy nasiana sira
Siram-boasary 70 g
Lafarinina 1 sotrokely
1 paiso amin'ny sira
Rano voninkazo voasary 10 g
Taratasy mofomamy mahavariana 2 mahitsizoro
Apetrakay ao anaty vera sy programa ny voanjo 10 segondra, hafainganam-pandeha 7.
Nokapohinay tao anaty lovia ny atody, tamin'ny tsorakazo. Manampia atody 40 g amin'ny voanjo (ny ambiny dia hoso-doko handoko ny faritry ny tadina).
Napetrakay tao anaty vera ihany koa ny dibera, ny siramamy, ny lafarinina, ny sira ary ny voninkazo voasary. Izahay dia manao fandaharana 15 segondra, hafainganam-pandeha 3.
Ampidinintsika miaraka amin'ilay spatula izay sisa tavela amin'ny rindrin'ny vera. Izahay dia manao fandaharana 10 segondra, hafainganam-pandeha 4. Napetrakay tao anaty lovia ny fangaro ary notehirizinay.
Manafana ny lafaoro hatramin'ny 200º izahay.
Vahao ny ravina mofomamy puffina roa mahitsizoro.
Aparitaho ny fangaro izay vao avy namboarinay tamin'ny takelaka (antsasaky ny tsirairay), avelao ny sisin'ny manodidina ny roa santimetatra nefa tsy hiparitaka amin'ny takelaka tsirairay.
Izahay dia manao ny fanapahana mba hahazoana kofehy 6 isaky ny ravina (ao amin'ny horonantsary azonao jerena ny fomba).
Ahodinay ny kofehy tsirairay avy, asio tombo-kase amin'ny sisiny mando.
Apetrantsika ao anaty lavaky ny moffin bobongolo izay nopetehinay teo aloha ny tadiny. Ny lasitra ataoko dia ho an'ny singa 6 ka nanao mofo roa aho.
Mandoko ny atin'ny tsiranoka tsirairay amin'ny atody nokapohina kely izahay.
Mofomamy amin'ny 200º mandritra ny 30 minitra.
Mamelatra izahay ary, raha ho an'ny singa 6 ny bobongolo dia averinay ireto dingana farany ireto hanamboarana ireo sisa tavela.
Fanazavana fanampiny - Mofomamy voanio sy amandy
Loharano - Vorwerk
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: General
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » General » Puff pastry sy voankazo voankazo maina
Amin'ny inona no handomanao ny tombo-kase amin'ny spiral?
Tsara ve ny kapoaka muffin amin'ny fanamboarana ireo tadiny ireo?
Ny rano voninkazo volomboasary dia afaka misafidy?
Mba hanaovana ny tombo-kase dia mando amin'ny rano kely aho.
Eny, eny, azonao atao ny mampiasa kapoaka muffin (angamba amin'ny fanaovana fohy kokoa ny fehin-kibo mba hidiran'ny tadiny ao anatin'io lavaka io). Azonao atao koa ny mametraka azy ireo mivantana eo amin'ny lovia, amin'ny taratasy fanaova.
Ny rano voninkazo voasary dia tsy voatery, mazava ho azy.
Manantena aho fa tianao izy ireo. Famihinana!
Tongan'ny zanak'ondry misy apricots sy plum maina
Sakafo henan'akoho sy paoma